चढ्ने होईन त अब ? नयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेट, अब १ लाख ९ हजारमै आउने छ यो मोडेल — SuchanaKendra.Com
चढ्ने होईन त अब ? नयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेट, अब १ लाख ९ हजारमै आउने छ यो मोडेल
काठमाडौं । बेलायती मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डले भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यको बाइक ‘बुलेट एक्स’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यो बाइकको किक स्टार्ट भर्सन १ लाख ४ हजार भारु र बुलेट इएस एक्स (इलेक्ट्रीक स्टार्ट) को मूल्य करिब १ लाख ९ हजार भारु हुने अनुमान गरिएको छ । रेगुलर मोडलको मूल्यभन्दा यो मूल्य ५० हजारले सस्तो हो ।
बुलेट एक्स र बुलेट इएस एक्स दुई वटा भर्सनमा बिक्री वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ । बुलेट एक्स जेट ब्ल्याक पेन्ट कलर अप्शनसँगै, बुलेट सिल्भर, स्याप हायर ब्ल्यु र इएस एक्स रेगल रेड, रोयल ब्ल्यु र जेट ब्ल्याक कलर अप्सनमा आउने छ ।